Shrub | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ụlọ nke Thuja: ọdịda, nlekọta, ozuzu
Thuja bụ onye nnọchianya nke conifers gymnosperm si n'ezinụlọ Cypress. Na okike, ha na-etolite ruo 7-12 mita n'ịdị elu. A na-ewere ala nna ha dịka Japan na North America. Ebe obibi a zuru okè dị ka onyinye ma ọ bụ dịka ihe mma maka ezumike Afọ Ọhụrụ. Site n'ụlọ obibi nke coniferous bụ ihe kachasị mkpa na ọ ga-atọ gị ụtọ karịa otu afọ.
Ịhọrọ ụdị uzo ugwu kacha mma maka ubi gị
Rowan - osisi ma ọ bụ osisi nke osisi Apple-nke ezinụlọ Rosaceae. E nwere ihe karịrị 100 ụdị ash ash, ebe a na-ekesa ihe ọkụkụ bụ Europe, Asia na North America. Nnukwu osisi Rowan Large A osisi mara mma ma ọ bụ shrub nwere oghere nke na-agbasa okpueze sara mbara pyramidal, usoro mgbọrọgwụ siri ike, na-eru mita 5-10 m.
Osisi - osisi ma ọ bụ osisi shrub, na-eto eto na elu ugwu. E nwere ụdị ụfọdụ n'ime ogbe na ọbụna n'ofe Osimiri Arctic. Ndị ọkà mmụta ihe ochie achọtala akwụkwọ nke akwukwo willow na Cretaceous sediments karịa ọtụtụ iri afọ. A na-eji ogologo oge mee ihe dị ka osisi ornamental, a ga-atụle ụdị willow a kasị mara amara n'isiokwu a.